Uyisusa njani i-geolocation yeefoto zethu kwi-iPhone | IPhone iindaba
Esinye sezixhobo zekhamera yesixhobo sethu se-iOS yinto enokwenzeka yongeza i-geolocation kwiifoto zethu. Inkqubo yokusebenza ye-iPhone iyakwazi ukufumana zonke iifoto esizithatha emephini, ngohlobo lokuba sikwazi ukuphonononga izinto esizenzileyo kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi. Kodwa kukho abasebenzisi abakhetha ukungabinziwa "yi-geolocated", kwaye nangakumbi emva kwehlazo le-spyware olwenziwe yi-Arhente yoKhuseleko yeSizwe yase-US.
Kule tutorial siza kuchaza ususa njani ulwazi lwendawo yenziwe ngokuzenzekelayo kwifoto ye-reel yethu. Ngale ndlela asizukushiya naluphi na umkhondo malunga neendawo esiye saya. Zimbini iindlela zokususa i-geolocation kwiifoto: eyokuqala, ngokuthe ngqo kuseto lwefowuni. Inketho yesibini isivumela ukuba sisuse olu lwazi kwiifoto esele sizigcinile kwi-reel yethu.
1 Ikhetho lokuqala: Ngokusebenzisa izicwangciso
2 Ikhetho lesibini: Ngokusetyenziswa kweQela lesiThathu
Ikhetho lokuqala: Ngokusebenzisa izicwangciso
Kuphela kufuneka sityelele useto lwe-iPhone yethu, iPod Touch okanye i-iPad ukunqanda loo nto, ukusukela kuloo mzuzu, wethu i-geolocation kwifowuni. Yayo:
Yiya kwicandelo leesetingi kwisixhobo sakho se-iOS kwaye uhambe uye kwindlela yokuNgasese-Iinkonzo zeNgingqi.
Nje ukuba ufike, konke okufuneka ukwenze kukungasebenzi kwendawo yakho yekhamera kwaye ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, iifoto zakho azisayi kuvela kwimephu.
Ikhetho lesibini: Ngokusetyenziswa kweQela lesiThathu
Ukuba kwelinye icala ufuna ukucima ulwazi esele linxulunyaniswe nenye yeefoto zakho, siyacebisa ukuba usebenzise izicelo ezinje UKoredoko ukusuka Ivenkile yosetyenziso. Esi sixhobo simahla kwaye sikuvumela ukuba uhlele ulwazi olunxulumene neefoto zakho kwaye uzigcine kwakhona kuluhlu.
Khuphela usetyenziso kwiVenkile ye App.
Yivule kwaye ugunyazise usetyenziso ukuba lufikelele kumqulu wakho weefoto. Ibonisa ilayibrari kwi icon engezantsi ebonakala kwicala lasekhohlo lesikrini.
Khangela umfanekiso ofuna ukuwuhlela, ucofe kuyo kwaye ukhethe ukhetho "Gcina Ngaphandle kweMethadatha" kwi "Iinkcukacha".
Uya kuba nefoto yakho igcinwe ngaphandle kwendibano.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izifundo kunye neencwadana » Isifundo: Uyisusa njani i-geolocation yeefoto zethu kwi-iPhone
Ndilahlekile kwisifundo, sinzima kakhulu, andazi ukuba ndingaya kanjani kuBucala kwisixhobo sam se-iOS emva koko ndizulazule kwiinkonzo zendawo: /
Nje ukuba ususe i-uvication kwiifoto, kuyenzakalisa ezinye usetyenziso, ndiyathemba ukuba ndinalo mbuzo kwaye bangandiphendula
Ukuphucula ukusebenza kwebhetri yakho kwi-iOS 7.1